कांग्रेस सभापति देउवा किन जाँदैछन् सिंगापुर ? नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित हुने – Medianp
कांग्रेस सभापति देउवा किन जाँदैछन् सिंगापुर ? नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित हुने
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, साउन २२, २०७५१३:५०0
काठमाडौं, २२ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुर जाँदैछन् । एक साता सिंगापुरमै रहने भएपछि देउवाले मंगलबार आकस्मिक पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएका छन् ।
बैठकमा समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भ, प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत प्रकरणपछि कांग्रेसले संसदमा खेल्नुपर्ने भूमिका, पार्टीको आगामी रणनीति, महासमिति बैठकको तयारीलगायतमा छलफल केन्द्रित हुने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवा नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिंगापुर जान लागेका हुन् । हरेक वर्ष उनले सिंगापुरको अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका छन् । उनीसँगै श्रीमती आरजु पनि सिंगापुर जाने पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । सिंगापुर बसाइका बेला आरजुको स्वास्थ्य पनि परीक्षण गरिने भएको छ । देउवाले दुई साताअघि नै सिंगापुर जान लागेका थिए । तर, डा.गोविन्द केसीको अनसन नतोडिएकाले उनले भ्रमण मिति परिवर्तन गरेका हुन् ।
देउवा विदेश जाने भएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि बुधबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पदेन परिषद्को पदेन सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि नेपाली कांग्रेस सरकासँग असन्तुष्ट छ । अब कांग्रेसले संघीय कानुन बनाएपछि मात्र नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सहयोग गर्ने भएको छ । आज बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यस विषयमा पार्टी धारणा तय गर्ने बताइएको छ ।
कसरी भयो एउटा आलुको मूल्य २१ करोड ! यस्तो छ रोचक तथ्य
ललितपुरका दुई खोलाबाट निकालिएको साढे ६ मेगावाट बिजुली त्यत्तिकै खेर गयो, प्राधिकरणको लापरबाहीले करोडौ नोक्सानी
सरकारलाई विप्लवको जवाफ, प्रतिबन्ध नयाँ होइन, प्रतिवाद गर्न तयार छौं, तर झुक्दैनौं